Nsogbu na Ohere Segmentation nke Ahịa | Martech Zone
Nsogbu na ohere dị iche iche nke ịzụ ahịa
Monday, December 14, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị ahịa na-atụ anya ka ahụmịhe nke onwe na ndị na-ere ahịa na-ahụkarị ohere na nkewa ahịa na nkeonwe. N'ezie, mmemme mgbasa ozi ahaziri iche mere ka ọnụego nzaghachi ka mma, mmụba ahịa na nghọta dị ike maka 48% nke ndị ahịa. Ozi ịntanetị nkeonwe na-ebugharị ugboro 6 nzaghachi ọnụego karịrị ozi ịntanetị na usoro ịhazi onwe onye siri ike gafee ọwa nwere ike ịnapụta 5 ruo 8 ugboro ROI na azụmaahịa.
Gịnị bụ nkewa nkewa ahịa
Nkewa bụ usoro nkewa nke onye ahịa gị ma ọ bụ ahịa ị na-achọ ịbanye n'ime otu akọwapụtara nke nwere njimara mmadụ, mkpa, ọdịmma, mkpa, na / ma ọ bụ mpaghara mpaghara. Segmentation na-enyere ndị ahịa ahịa aka imejupụta usoro ahaziri iche nke dị oke mkpa ma zubere maka otu ọ bụla - na-abawanye arụmọrụ mgbasa ozi zuru oke.
Ebe ọ bụ na 86% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na nhazi onwe onye na-ekere òkè na mkpebi ịzụta ha, gịnị kpatara ndị ahịa ji agbasi mbọ ikewa ma hazie onwe ha?
36% nke ndị ahịa na-akọ na ịhazi ozi n'ofe ọwa bụ ihe ịma aka.
85% nke ụdị na-ekwu na atụmatụ # nkebi ha dabere na nchịkọta, nke dị mfe.
Ihe na-erughị 10% nke ndị na-ere ahịa ọkwa ka elu na-ekwu na ha dị oke irè na #nhazi.
35% nke ndị ahịa B2C kwuru na ịmepụta otu echiche nke ndị ahịa ọ bụla gafee ọwa bụ nnukwu nsogbu.
Na ihe omuma a, Kahuna Nkọwapụta ihe kpatara nkewa na nkeonwe abụghị ihe dị mma ịnwe ma ọ bụ ihe dị mkpa, nloghachi site na ịgagharị karịa nkewa dị mfe, yana ihe na-egbochi ndị na-ere ahịa.
Kahuna bụ nkwukọrịta akpaaka nkwukọrịta nke na-eme ka data ọgaranya gafere iji mepụta ma zipụ ozi ahaziri iche na oke. Jiri ntinye, email, ngwa, na ọwa mmekọrịta ka gị na ndị ahịa gị kwukọrịta oge na ebe ha nwere ike itinye aka.
Tags: kahunankewa ahiankewa ahiakeonwenhazi ozi nkeonwenkewainfographic nkebiezubere iche
Omume kachasị mma maka ịchụpụ Email na ndị na-emetụta ya
Akụkụ 5 nke Ọkachamara Ọrụ Nlekọta